Big City Small World (Series3Episode4- A New Chef) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 9, 2013 at 13:30 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode4- A New Chef (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၄) စားဖိုမှူးအသစ်)
တိုနီ၏ကော်ဖီဆိုင်တွင်ရောင်းသောအစားအစာများကိုမည်သူမျှ သိပ်မကြိုက်လှချေ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ ကားလို့စ်ရှိတယ်လေ။
Series3Episode4- A New Chef ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
အိုကေ . . .
ပုံမှန်အတိုင်းပဲ။ ဆန်းဒ၀စ်ခ်ျ် ရှိတယ်။ တူနာငါး၊ ကြက်သား၊ ဒိန်ခဲ၊ ၀က်ပေါင်ခြောက်နဲ့ရမယ်။ ကြက်ဥကြော် ဖြစ်ဖြစ် ကြက်ဥခေါက်ကြော်ဖြစ်ဖြစ်ရမယ်။ ကြက်အူချောင်း၊ ၀က်အူချောင်းကောင်းကောင်းတစ်ချို့လည်းရှိတယ်။ ကြက်သားဟင်း ...
အာ ရပါပြီ။ ကျေးဇူးပဲ။ ကော်ဖီပဲသောက်တော့မယ်။
ဟိုင်း ကားလို့စ်။ ဒီမှာလာထိုင်လေ။
Carlos: No. I don’t want to sound rude, but ... well... the food here isn’t very good!
ဟင့်အင်း။ ရိုင်းတဲ့လေသံတော့မပေါက်သွားချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဆိုင်ကအစားအစာတွေက သိပ်မကောင်းဘူး။
ဆက်ပြောပါ။ ဒါမဆိုးပါဘူး။ ဗြိတိသျှပုံမှန်အစားအစာတွေမို့ပါ။
အိုး အဲဒီလောက်လဲဇီဇာမကြောင်ပါနဲ့။ (ဘ၀င်မကိုင်ပါနဲ့) တို့ဗြိတိန်မှာလည်း ကောင်းကောင်းစားကြပါတယ်။
ဟိုင်း ငါကောပါလို့ရမလား။ (တစ်ဝိုင်းတည်းဝင်ထိုင်သည်)
ကားလို့စ်က ဗြိတိသျှအစားအစာတွေဘယ်လောက်မုန်းတဲ့အကြောင်း ပြောနေကြတာ။
အေး လန်ဒန်မှာစားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးလွန်းတယ်။
ဗြိတိန်မှာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်၊ ရာသီပေါ် ဒေသခံအစားအစာတွေစားရင် ကောင်းပါတယ်။
အေး ဟုတ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အချိန်တိုင်းတော့မရနိုင်ဘူး။
Tony: No problem
အိုကေ။ အိုကေ။ နင်ပြောတာဟုတ်ရင်ဟုတ်မှာပေါ့။
အိုး သွားပါပြီ။ တိုနီလာပြီ။ သူ့အစားအစာတွေအကြောင်းဝေဖန်နေတာ သူကြားပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။
အာ . . . ဒီမှာကိုယ့်လူတို့။ အင်း . . . ငါသိပ်နေမကောင်းဘူး။ လုံးဝမကောင်းဘူး။ ငါအိမ်ပြန်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒီနေ့တစ်ခြားစားသောက်သူတွေလည်းမရှိဘူး ဆိုတော့ မင်းတို့အားလုံး အိမ်ပြန်ရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်။
အိုလီဗီယာ။ အိုး စိတ်မကောင်းပါဘူးတိုနီ။ စိတ်မပူပါနဲ့။
ဟင့်အင်း စိတ်မပူနဲ့။ ငါက လေ့ကျင့်ထားတဲ့စားဖိုမှူးတစ်ယောက်ပါ။
မင်းအစားဝင်လုပ်ပေးမယ်။ ချက်ရပြုတ်ရတာ ငါဝါသနာပါတယ်။
ဒါ နင့်အတွက်အခွင့်အလမ်းပဲထင်တယ် ကားလို့စ်။
အေး ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ အရင်တုန်းကလည်း စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ ကော်ဖီဆိုင်ဆက်ဖွင့်နေအောင် ငါလုပ်ပေးမယ်။ မင်းတစ်ရက်စာမရှုံးတော့ဘူးပေါ့ကွာ။
အိုး၊ အဲ ကောင်းပြီလေ။ ဒီလိုထင်တာပဲ။ ငါဆိုလိုတာက ကျေးဇူးပဲကွာ။
ကဲဒီလိုဆိုရင်ကားလို့စ်ရေ။ ငါသွားပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။